Semalt: Yintoni i-Spam Bot kunye nendlela yokuyivimba
Ukuba ungene kwi-akhawunti yeGoogle Analytics kwaye wubona i-spike ngokukhawuleza kwiiseshoni, amathuba kukuba i-bots kunye nokuthunyelwa kogaxekile kuye kwashaya iwebhusayithi yakho. Ngamazwibela, unokucinga ukuba kuya kukufumana ukuthengisa kunye nekhokelo, kodwa ukujonga ngakumbi kumthombo weeseshoni kuya kukunika ingcamango yokuba ivelaphi ihamba. Ii-Spambots zixanduva kakhulu kwi-website yezithuthi . Kwiminyaka yakutshanje, ii-webmasters ezininzi kwaye zikhalaza ukuba i-spam bots ezithungelayo iindawo zabo kwaye kubonakala ngathi abantu boqobo baye bavakashela amaphepha akho ewebhu. I-SEO emnyama ye-SEO kunye ne-spam bots ezingalunganga ziyakwazi ukufumana idatha yakho ye-Google Analytics kwinani elikhulu - server installation services. Ukongezelela, ezi zibini zibonakala njengoko zivakatye indawo yakho ngezihlandlo ezininzi kodwa isantya se-bounce si-100%. Unikezelwa kungekho datha efanelekileyo, kwaye indawo yakho yesayithi iqala ukunciphisa usuku ngalunye.
Yintoni i-Bot Spam?
uFrank Abagnale, u-17 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uchaza ukuba i-bots zizenzekelayo iinkqubo ezinokukwazi ukwenza izenzo ngaphandle kwekhokelo lombono. I-bot ijongene nokwenza imisebenzi emininzi umntu angayigqiba kwiiyure, iintsuku okanye iiveki. Iibhokhwe zidinga kuphela imizuzwana embalwa ukufeza imisebenzi emininzi ngexesha kwaye zidalwe ukutyelela indawo yakho ngokungaqhelekanga.
Ukwahlukana phakathi kweebhokhwe ezingekho mthethweni kunye neziMthethweni
I-bots esemthethweni okanye yangempela iyingcingo yenjini njengeBing, Yahoo, ne-Google. Bangayibonisa iwebhusayithi yakho kwaye ibonise onke amaphepha akho kwi- iziphumo zeenjini zokusesha . Ezi bhubhu azilimazi indawo yakho nayiphi na indlela, ngelixa i-bots ezingekho mthethweni zenzelwe ukulimaza iwebhusayithi yakho..Kubonakala ngathi ba tyelela indawo yakho kwaye banokufumana iimpendulo ezininzi, kodwa abayindawo yokunceda kwaye babizwa ngokuba yi-bots bots. I-bots eyaziwayo kunye neyaziwayo ezidumileyo zokubambisa i-spam ziyi-event-tracking.com, i-free-share-buttons.com, i-social-buttons.com, i-darodar.com, kwaye ifumana-traffic-now.com.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo ezijikeleze ezi website, kwaye ii-URL zazo zivela kwiakhawunti ye-Google Analytics ngokuzenzekelayo. Ukuba ulandela i-URLs ukuze ukwazi ngokubanzi malunga neenkampani kunye neepakethe zentengiso, amathuba abo aya kukulimaza iwebhusayithi yakho. Ngokomzekelo, ukuba ubona ukudluliselwa kogaxekile (jonga-your-website-here.com) kwiakhawunti yakho ye-Google Analytics, kufuneka uwasuse ngokukhawuleza.
njani ukuvimbela i-spam bots kwiakhawunti yakho ye-Google Analytics?
Phantse zonke iisayithi zokudluliselwa kogaxekile zikhulu kwaye zifanele zipheliswe ngokukhawuleza. Ukuba uhlangabezana ne-spam entsha yokudlulisa kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics, kufuneka uyihlunule, kodwa ukuphazamiseka kwenkqubo kukuba iindawo ezimbi ziza kuqhubeka zivakashela iwebhusayithi yakho. Kuthetha ukuba baya kuthatha izixhobo zeseva yakho kwaye kuya kuthintela isivinini sokulayisha sesayithi lakho. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukusebenzisa ifayile .htaccess ukuvimba zonke iiwebhusayithi zegaxekile. Kufanelekile ukuthetha ukuba ifayile ye -htaccess yindlela enamandla yokuvimba isayithi elityhukisayo. Isinyathelo sokuqala ukufaka ikhowudi ethile kwifayile yakho .htaccess. Ukuba le fayili ayisebenzi kakuhle, kufuneka ulayishe entsha fayile .htaccess kwiingcambu ze-domain.
Enye indlela esheshayo nelula yokulungisa i-spam bot ngokudala izihlungi eziphambili kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Ngena kwi-akhawunti yakho kwaye uklikha kwiTebhu ye-Admin. Kule nto, kufuneka uhambe kwindlela yokwenza iNew View View, kwaye phantsi kwecandelo lokujonga igama lokujonga, uza kubona inkinobho ye-Spam Free. Apha ucofa kwiNew Filter ukhetho kwaye ungalibali ukubiza isihlunu sakho.